Nyanzvi Kubva Semalt Inotsanangura Kuti Sei Kutanga Kuda SEO
Rimwe remakambani makuru ekutengeserana kwekutanga kutanga kwekutengesa internet. Kana ukawana SEO chakanaka, iwe uchava nezviuru zvevakatarwa kune vashanyi vari kutsvaga zvauri kupa (chigadzirwa kana basa) zuva rega rega pasina kushandisa dime, nguva dzose pavanenge vachitsvaga pawebsite yako. Mune mamwe mazwi, SEO ndeyendarama yegoridhe.
Zvisinei, kusiyana nedzimwe nzira dzekutengesa sekutamba matanho apo iwe unobhadhara kuti uwane mhinduro, SEO haisi nyore. Kuwanda kwekutanga kunotanga kushandisa kushandisa "hacks" senzira yekuwana mitezo pfupi kuburikidza nekuwedzera kuvepo kwavo paIndaneti. Iyi haisi iyo nzira yakanakisisa yokufamba nayo SEO. Kuti SEO ishande, unoda mazano akanaka ekutengesa, SEO inongova chikamu chacho nokuti hachishandi chete.
Julia Vashneva, nyanzvi inotungamirira Semalt , inojekesa pane SEO yekutanga, kupa mazano ekufambisa bhizinesi rako.
Inovaka Bhuku Rako
Kutsvaga injini yekugadzirisa ndeyekuvaka chigadzirwa, uye iwe uchabudirira kana iwe uchipa injini dzinotsvaga zvavari kutarisa zvakadai se:
Zvine zvinyorwa: kana iwe uchida kutarisa "maapuro," site yako inofanira kunge yakagutsikana nezveapuro.
Backlinks: izvi zvinowedzera kufarira kwako kune mamwe mawebsite.
Zviratidzo zvehupfumi: inowedzera vateveri, zvikamu, nemigwagwa uye izvi zvinoratidza kuti vanhu vanotenda uye kufanana newe.
Nguva iri pa site uye nekudarika-kuburikidza nehuwandu: kana uine zvinhu zvakanaka uye zvakakodzera, iwe uchapiwa mubayiro..
Kana iwe ukapa injini dzekutsvaga zvavari kutsvaga paunenge uchishandisa mamwe mazano eSEO, iwe uchavandudza mararamiro ako kwenguva refu.
SEO uye Content Go Go Together
Kutanga kunofanira kuisa pfungwa pahuwandu hwekutengesa sechirongwa chikuru chekutyaira SEO campaign yako. Kuguritswa kwehutano kwakanaka pakutanga kwekutanga nokuti:
Inovaka Simba Rako uye Nhengo
SEO mabhizimusi anotanga kuburikidza nekuvabatsira kuti vakwanise kutarisa mazwi avo. Vanhu vazhinji iye zvino vanoziva kuti chiremera chekuvaka uye kushamwaridzana kwewebsite kunonyanya kukosha kwekubudirira kweSeO campaign. Zvisinei, vazhinji vavo havazivi kuti vanovaka sei hukama uye kuwedzera simba. Pane nzira dzekuvaka mazano kune webhusaiti yako kuti uwedzere SEO yakadai sekupindira kwepachipiri, kuongororwa uye kuiswa mune zvese-rounds.
Asi, kuva nekutaura uye kunakidza kwehutano inzira yakarurama yekukwezva zvikwangwani kune nzvimbo yako. Nokufamba kwenguva, ichavandudza simba rako uye richakubatsira iwe kuve yakakwirira kune yako yose yepamwechete mazwi.
Zviri Mukati Zvinowedzera Zita Rako Rokunyora
Kana zvasvika kune SEO uye zvakagadziriswa, kutanga kunotanga kuisa pfungwa pahuwandu hwemashoko anokosha kune avo vavanotarisira. Izvi zvinokubvumira kuti iwe ugadzire zvinhu zvinotarirwa zvinosvika kune vateereri vako pamatanho akasiyana ekutenga.
Nzvimbo yako inofanirwa kuva nehutano inoshandisa mamwe mazwi anonyanya kukosha kune chigadzirwa chako kana basa kuti uwedzere kusvika kwako. Izvi ndizvo zvinonzi "evergreen content" sezvo inonyanya kushandiswa kushandisa domain nepeji yepamusoro (kutsvaga nehutano) kuti uwedzere kuvepo kwako paIndaneti uye kutyaira dzimwe nzira kune webhusaiti yako.
Kana uchinge uine vashanyi kune nzvimbo yako, iwe unogona kuvatungamirira pakuita chisarudzo, munyaya iyi, kutenga.
Zviri mukati uye SEO inoshanda pamwe chete kuvaka chitupa chako, kusika kukosha uye kukura bhizinesi rako. Sekutanga, iwe unoda izvi zviviri kuti uwedzere hupenyu hunoramba huri nani Source .